Myat Shu - သတင်းဆောင်းပါး
You are here : Myat Shu » Archives for သတင်းဆောင်းပါး
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အကုန်လုံးကိုလွှတ်ပေးပါလို့ပဲ ပြောချင်တာ
Published By Myat Shu On Sunday, October 23rd 2011. Under သတင်းဆောင်းပါး
စမ်းချောင်းက ကိုဇာဂနာရှိရာ ၄လွှာတိုက်ခန်းရှေ့တံခါးရှေ့ရောက်တော့ အခန်းတွင်းထဲမှ စကားပြောသံများ အပြင်ဘက်ထိ လျှံထွက်နေတာ ကြားရပါတယ်။ လူရွှင်တော် သရုပ်ဆောင်ကိုအရိုင်းရဲ့ ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေက သနားစရာကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရပြီး ကိုဇာဂနာရဲ့ အမ(မရီး) မမငြိမ်းက တံခါးလာဖွင့်ပေးပါတယ်။ မျက်မှန်နဲ့အသားဖြူဖြူအသက် ၄၀ ၀န်းကျင်အရွယ် မမငြိမ်းက သတင်းသမားတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေ တောက်လျှောက်လုပ်နေရတဲ့အတွက် မနားရသေးကြောင်း၊ ၁၀ မိနစ်ပဲ မေးခွင့်ရနိုင်မဲ့အကြောင်း ပြောပြပြီး တံခါး ဖွင့်ပေးပါတယ်။ ၁၂ ပေ ပတ်လည်လောက် ရှိတဲ့အခန်းထဲမှာ သတင်းသမား၊ ဧည့်သည်အမျိုးသမီး ၃ဦးလောက်နဲ့ အနုပညာသမားများ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုအရိုင်း၊ ကိုမေတ္တာ ၊ ကိုဂေါ်ဇီလာအပြင် သီးလေးသီးက ၊ ကိုစိန်သီးနဲ့ ကိုဇီးသီး တို့လည်း ရောက်နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ၀ိုင်းထိုင်ကြပြီးစကားပြော ... Continue Reading
၁၂ ပွဲသမားတို့ အားခဲထားတဲ့ ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲ
Published By Myat Shu On Saturday, October 15th 2011. Under သတင်းဆောင်းပါး
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းမှာ အထင်ရှားဆုံး၊ အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားပွဲကို နှစ်စဉ်အတိုင်း သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၃ ရက်မှ လပြည့်ကျော် ၇ ရက်အထိ စည်စည်းကားကား ကျင်းပပါတယ်။ တကယ်တမ်းကတော့ ကုသိုလ်တော်ဘုရား၊ စန္ဒာမုနိဘုရား၊ ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားတို့ တစ်ပေါင်းတည်း ကျင်းပတဲ့ ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပွဲတော်ကြီးပါပဲ။ ကုသိုလ်တော်ဘုရား မင်းတုန်းမင်းရဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တော်ဘုရားတွင် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၂ ရက်မှာ သံဃာတော်အပါး ၃၂၀၀ ကျော်တို့အား ဆွမ်းတော်ကြီးလောင်းလှူ ပူဇော်ပါမယ်။ ကုသိုလ်တော်ဘုရား အနောက်ဘက် အရုဏ်ခံမှာ ဆွေတော်မျိုးတော်များက လပြည့်ကျော် ၁ ရက် ညနေတွင် ဧည့်သည်များကို ဧည့်ခံတယ်။ ၂ ရက်နေ့ မနက်မှာ ဆွမ်းတော်ကြီးလောင်း၊ ရေစက်ချပြီးမှ ပြန်လေ့ရှိတာပါ။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, October 11th 2011. Under သတင်းဆောင်းပါး
မန္တလေးမြို့တွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အနေနဲ့ နှစ်သက်တမ်းအရှည်ဆုံး လုပ်ငန်းဆိုရင် “၀င်းဝင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း” လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ မန္တလေးမြို့၊ ၂၆ လမ်း ဆိုင်းတန်းမှာ တည်ရှိပြီး လက်ရှိ အချိန်အထိ ချက်ပလက် ၅ စီးဖြင့် သာရေး၊ နာရေးကိစ္စများမှာ လူစီးယာဉ်အဖြစ် ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ မြို့မတူရိယာအသင်း တည်ထောင်အပြီး နှစ် ၂၀ ကြာကတည်းက တီးဝိုင်းစုံကို မြို့ပေါ်ပွဲများမှာ ငှားရမ်းပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ အခမ်းအနားများတွင် မီးစက် ငှားရမ်းတာတွေမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးမရမီ ၁၉၄၅ ခုနှစ်ကတည်းက စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့တာမို့ ယနေ့ဆိုလျှင် ၆၆ နှစ်ခန့် သက်တမ်း ရှိနေပါပြီ။ ၀င်းနှင့် ဇော်ဝိတ် ၀င်းဝင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စတင်စဉ်က “၀င်း”တစ်လုံးတည်းပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက လုပ်ငန်းတူဆိုလို့ ... Continue Reading
ဟိုဘက်ကမ်းက မီးထိန်ထိန် … ဒီဘက်ကမ်းက မီးထိန်ထိန်
Published By Myat Shu On Saturday, October 8th 2011. Under သတင်းဆောင်းပါး
မာကျူရီ မီးရောင်မှိန်မှိန် အောက်တွင် ကျောက်တုံးချင်း စေ့နေသော လမ်းကြမ်းရှိသည်။ မီးရောင်ဖြင့် အနားကွပ်ထားသော ကျောက်တုံးခုံးခုံး စီရရီကို သတိရတိုင်း ကြည့်နေမိမြဲ။ နှစ်စဉ် တော်သလင်းလ ကုန်လုလုတွင် ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးငယ်တိုင်း ညပိုင်းမှာ မီးထွန်းကားကိုယ်စီ အပြိုင်ဆွဲကြသည်။ ဖယောင်းတိုင် မီးဖြင့် ရောင်စုံ လင်းလက်နေသော မီးထွန်းကားငယ်များသည် လမ်းမျက်နှာပြင်ထက်တွင် နိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြင့် လွန်းပျံ ယက္ကန်းရှယ်နေသည်။ တရှဲရှဲမြည်သံနှင့်အတူ ညှော်နံ့စူးစူး ပျံ့လွင့်လာသည်။ ဆီမီးထွန်းအပြီး လက်ကျန်ဖယောင်းတွေကို စုပြီး အရည်ကျို၊ သင်္ဘောရိုးတံ စိတ်ကြိုက် အရှည်ထဲမှာ အပ်ချည်မီးဇာထည့်ပြီး ဖယောင်းရည်ထည့်မည်။ ထို့နောက် ရေခဏစိမ်ကာ သင်္ဘောရိုးတံကို ခွာလိုက်သည်နှင့် ကိုယ်တိုင်လက်ဖြစ် ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ငယ်ဘ၀တွေကို လွမ်းရလွန်းသောအခါ ဟိုစဉ်တုန်းကလို ... Continue Reading
အဝေးရောက် မန္တလေးသားတွေ မန္တလေးကို လွမ်းကြတဲ့အထဲမှာ ပွဲသဘင်များတဲ့ ၀ါကျွတ်ကာလနဲ့ လတန်ဆောင် ဆောင်းညတွေက ထိပ်ဆုံးကပေါ့။ အဲဒီကာလတွေမှာ ပွဲစာရင်းကြည့်စရာ၊ ရှာစရာမလို၊ ညပိုင်းဆိုရင် ဆိုင်းသံကြားရာကိုသာ စက်ဘီးကိုယ်စီနဲ့သွား၊ အငြိမ့်တွေဆိုတာ များပါလေ့။ ပွဲကြိုက်လှချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ တခြားနယ်က လူတွေများ မန္တလေးရောက်ရင် ပန်လန်လက်သွားလိမ့်မယ်။ အငြိမ့်တွေက ဈေးချိုမှာ နေ့ပွဲ၊ မြို့လေးပြင် လေးပြမှာ ညပွဲတွေနဲ့ အောတိုက်နေတာကိုး။ တပ်ကြီးအိုးပုတ် ဘုရားသုံးဆူ မြတ်စွာ ဘုရားပွဲတော်ကို သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၀၊ ၁၁) ရက်များမှာမှ ကျင်းပပေမယ့် တော်သလင်းလဆန်း ၈ ရက်ကတည်းက အိုးပုတ်ရောင်းသူတွေနဲ့ စည်းကားနေပါပြီ။ မြစ်ငယ်နဲ့ စစ်ကိုင်းတံတားဟောင်း လမ်းမကနေ တောင်ဘက်ကို ၀င်ရတဲ့ တပ်ကြီးရွာကနေ လာရောင်းကြတာပါ။ တချို့က အိမ်တော်ရာဘုရားပွဲ၊ ... Continue Reading
မြိုင်နယ်က ရေနံမှော် … ဟိုတုန်းကနဲ့ မတူပါလေ
Published By Myat Shu On Sunday, October 2nd 2011. Under သတင်းဆောင်းပါး
“ရေနံ”ဆိုတာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးက နှစ်ခြိုက်ခုံမင် လိုချင်ကြတဲ့ တွင်းထွက် ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ရေနံကို အကြောင်းပြုပြီး ချမ်းသာမှု အဖုံဖုံ၊ တိုးတက်မှု မျိုးစုံနဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ လက်မထောင်နေကြတဲ နိုင်ငံတွေ ရှိပါတယ်။ ကူဝိတ်ကို အီရတ်က သိမ်းပိုက်ဖို့ ကျူးကျော်ခဲ့တာ ရေနံကြောင့်ဖြစ်သလို အမေရိကန်က အဲဒီ အရေးအခင်းမှာ ကူဝိတ်ဘက်က ပါဝင်ခဲ့တာလည်း ရေနံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနံဆိုတာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကြမ်းတစ်ခု ဖြစ်နေတော့ စွဲမက်ရာပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုလိုနီလက်ထက်က ချောက်ရေနံမြေကို အုပ်စိုးပြီး ရေနံ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ရေကြောမြေကြောတွေ ရှာဖွေစမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ရာမှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့နယ်အတွင်း ရေနံစမ်းသပ်တွင်းဟောင်းများ တွေ့ရှိရပါတယ်။ မြိုင်မြို့နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက ... Continue Reading
မန္တလေး ဘတ်စ်ကားအိုများရဲ့ ပစ္စုပန်နဲ့ အနာဂတ်
မန္တလေးကနေ မြန်မာနိုင်ငံဒေသ အသီးသီး ဆီကို ပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ ယာဉ်လိုင်းပေါင်း ၇၇ လိုင်းရှိပြီး သူတို့ကနေ နေ့စဉ် ယာဉ်အစီးရေ ၆၆၀ စီးနဲ့ ခရီးသည်တွေကို ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ ယာဉ်လိုင်းအသီးသီးမှာ ယာဉ်ကြီး (မှန်လုံ၊ ဘတ်စ်) ၉၉ စီး၊ ယာဉ်လတ် (ဒိုင်နာ) ၅၇၂ စီး၊ ယာဉ်ငယ် (ဟိုင်းလပ်) ၂၆၈ စီး၊ စုစုပေါင်း ၉၃၇ စီး ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဓာတ်ငွေ့သုံးယာဉ် ၁၄၆ စီးလည်း ပါပါတယ်။ လက်ရှိမှာ သက်တမ်းကာလ ကြာမြင့် ယာဉ်တွေကို အက္ခရာ သတ်မှတ်ချက်အလိုက် ဖျက်သိမ်းရေနဲ့ အစားထိုးယာဉ် တင်သွင်းရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ တိုးတက် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, September 18th 2011. Under သတင်းဆောင်းပါး
တောင်းရမ်းစားသောက်သူများရဲ့အပြုအမူများဟာ စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် ပျက်ြပားစေခြင်း၊ မြို့အဂါင်္ရပ်ကို ထိခိုက်စေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး မြို့ကြီးများမှာ တောင်းရမ်း စားသောက်သူများ ပပျောက်ရေးကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီများကလည်းကောင်း၊ အခြားမြို့ကြီးတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များကလည်းကောင်း၊ စီမံချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင် အခြေအနေမဲ့များနဲ့ မိဘမဲ့လေလွင့် ကလေးသူငယ်များ ပပျောက်ရေးအဖွဲ့ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်က အသစ်ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အခြေအနေမဲ့ ကလေးသူငယ်များကို တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းကျောင်းများသို့ ပို့ဆောင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်။ ကိုယ်လက်အဂါင်္ မသန်စွမ်းသူများကို လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ပူးပေါင်းပြီး စောင့်ရှောက် ... Continue Reading
ရွှေတူးဖော်ခြင်းကြောင့် မြစ်ချောင်း တိမ်ကောမှု သတိပြု၊ မြေများကို မူလနေရာတွင် ပြန်ဖို့ရန်လို
ဟုမ္မလင်းမြို့ကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလျက်ရှိသော ဥရုချောင်းဖျားတွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ၏ ရွှေကျင်မှုကြောင့် အဆိုပါချောင်းသည် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တိမ်ကောလု နီးပါးဖြစ်ခဲ့ရပြီး ယင်းချောင်းဖြတ်သန်း စီးဆင်းရာ နောင်ပိုအောင်နှင့် နန်တောမြို့များတွင် ကမ်းပါးပြိုမှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများနှင့် ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ သိရှိရသည်။ ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အဓိကအားဖြင့် မြစ်ချောင်းများအတွင်းမှ ကျင်ယူသည့်နည်း (Secondary Way) နှင့် ကျောက်ကြောများ အတွင်းမှ တူးယူသည့်နည်း (Primary Way) ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ နည်းလမ်းနှစ်ခုတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မြစ်ချောင်းများအတွင်း ကျင်ယူသည့် နည်းမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မြေဆီမြေသားကို ထိခိုက်မှု နည်းပါး၍ မြေသား၊ ကျောက်ကြောများ အတွင်းမှ တူးယူသည့် ... Continue Reading
ကျွဲ နွားတွေ ခွာရေစိုစေချင်
Published By Myat Shu On Monday, September 5th 2011. Under သတင်းဆောင်းပါး
“အသားသတ်ကုန်းသို့ မရုန်းဘဲ ညင်သာနှလုံး မရွှင်ပါသော်လည်း အားခဲလို့ တင်းကာလိုက်ပါ အိုကြီး အိုမ သြော်.. သနားစရာ့ နွားအလှညိုပြာ… အနောက်က နေလုံးပျောက်တော့မယ့် ဆည်းဆာ” အချိန်တန်လျှင် ဘ၀နေ၀င်ချိန် ဆိုတာ ရောက်လာစမြဲ ဆိုပေမယ့် အချိန်မတန်ဘဲ ဘ၀နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ နှမြောဖို့ ကောင်းလေစွ။ ကျေးလက်တောရွာများတွင် မနက်တုံးခေါက်သည်နှင့် မိန်းမသားများက ထပြီး ဆွမ်းချက်ကြသလို တပြိုင်နက်ထဲမှာပင် မိမိတို့၏ စီးပွားဖက်၊ ကြီးပွားဖက်ဖြစ်သော ကျွဲ၊ နွားများကိုလည်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်စေရန် ကျွေးမွေးကြရသည်။ မိမိတို့နှင့် အပြန်အလှန် ကျေးဇူးတရားရှိကြသော ကျွဲ၊ နွားများကို ဂရုစိုက်ကြရသည်။ သန်မာထွားကြိုင်းအောင် ကျွေးမွေးကြရသည်။ သူတို့တစ်တွေ ပျော်မြူးနေပါမှ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လို့ အဆင်ပြေသည်။ ထွန်ရယက်ရလို့ အားရှိသည်ကိုး။ ရှေးလူကြီးတွေက ... Continue Reading